Vhidhiyo: Yemagariro Media Rumuko 3 | Martech Zone
Vhidhiyo: Yemagariro Media Rumutsiridzo 3
Chitatu, July 13, 2011 China, Gumiguru 27, 2011 Douglas Karr
Neimwe chikonzero, ini handimboneta nekuona aya anoshamisa mavhidhiyo kubva Zvemagariro. Iyi yazvino vhezheni yeiyo Socialnomics vhidhiyo yakaburitswa munaJune, 2011. Socialnomics yakavambwa naErik Qualman nechinangwa chekupa Zvemagariro & Nharembozha, Zvidzidzo & Zvishamiso. Ive neshuwa yekutarisa blog yaErik. Ndinovimba kuzomusvitsa pa Kushambadzira Technology kuratidza rimwe zuva!
Ndakainakidzwa… kunyangwe hazvo, sekutaura kwakaita imwe, vakapomera nhema Star Wars trilogy nekupeta Darth Vader zvisizvo.
Gadziriso yeGmail… Zvirinani Kunonoka kupfuura Kusamboitika
Blog Kutsvaga Injini Kugonesa